Hevitra firavaka DIY ho an'ny efitrano fandriana | Asa tanana
Asa tanana | 25/09/2021 10:22 | Asa tanana an-trano
Ho an'ny haingo amin'ny efitrano fandriana dia azonao atao ny misafidy amin'ny fividianana ireo singa samihafa tianao hapetraka, toy ny a seza na jiro latabatra, ary koa amin'ny famoronana ny sombinao manokana. Hitantsika amin'ity lahatsoratra ity ny sasany Hevitra fanaingoana DIY ho an'ny efitrano fandriana azonao atao amin'ny tananao manokana raha te hikitika manokana an'io efitrano akaiky io ianao.
4 lela fanaovan-jiro
6 indray misintona
8 Fanaka fanampiny naverina amin'ny laoniny
ny fonony Izy ireo dia mety ho tsotra be amin'ny famolavolana na amin'ny famolavolana bebe kokoa, arakaraka ny fanirianao. Ary ambonin'izany rehetra izany, azo namboarina be. Ary koa, tsy mila mividy unus vaovao ianao, esory fotsiny ny fonony taloha na alao ny ondana.
Ny cushions dia tena azo ampiharina ary, ankoatr'izay, ny fandriana tena ho tsara tarehy io. Afaka manana betsaka araka izay tadiavinao ianao. Azonao atao koa ny manova ny fonony mba hifanaraka amin'ny vanim-potoana amin'ny taona na ireo hetsika tianao hasongadina amin'ny haingon-trano, toy ny Krismasy, Halloween, Fetin'ny mpifankatia sns.
Raha mampiasa ambainy ianao dia afaka manao koa ataovy ny tenanao. Mora ny manova azy ireo ary azo ampiarahina amin'ny zavatra haingon-damba hafa koa, anisan'izany ny fonony. Na dia mitaky asa kely aza ny fanovana azy ireo dia azonao atao ihany koa izany arakaraka ny fotoan'ny taona na rehefa te hanome rivotra hafa ianao ao amin'ny efitrano fandriana.
Ny lohan'ny farafara dia a singa haingon-trano fandriana afaka manao ny tenanao ianao. Azonao atao ny manao azy amin'ny lamba mba hifanaraka amin'ny ambiny amin'ireo singa, mampiasa singa voaodina, misafidy singa vita amin'ny hazo, sns.
iray hafa Ny haingon-trano DIY izay azonao atao dia ny jiro, na ny valindrihana na ny mpanampy amin'ny latabatra hafa. Azonao atao ny manambatra azy mora foana amin'ireo ambin'ny singa noforoninao na amin'ny olon-kafa novidinao, na mampiasa fitaovana mifanohitra fotsiny. Azonao atao ny mampiasa kofehy voajanahary na zavatra vita fanodinana, ary koa lamba sy fitaovana hafa kanto kokoa, raha tianao.
Milaza izahay fa kanto rindrina satria ity teny ity dia mifanentana amin'izay rehetra azonao ahantona, manomboka amin'ny sary hosodoko ka hatramin'ny sary mozika, famoronana vy, famolavolana geometrika, vatosoa, mpihaza nofinofy, na zavatra hafa azonao eritreretina, toy ireo singa manazava. avy amin'ny singa namboarina. Azonao atao ny milalao ny endrika, ny fitaovana ary koa ny jiro.
Ny poufs dia singa haingon-trano izay tena ilaina tokoa. Ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, miankina amin'ny halavany sy ny endrik'izy ireo, dia afaka manao kiraro kiraro izy ireo, toy ny singa mpanampy hipetraka na hamela ireo akanjo fa hotafinao. Ary azonao atao ny manao azy ireo. Mila mifidy ny fomba fotsiny ianao ary miasa.
Raha tokony hampiasa jiro mpanampy na ho famenon'ireto dia azonao atao apetraho eo amin'ny rindrina ny tadin'ny jiro kely mihantona tsara, tsara eo anelanelan'ny fanaka sy ny haingon-trano amin'ny efitrano fandriana. Afaka mahazo vokatra mahafinaritra ianao ary mamorona atmosfera mahafinaritra.
Fanaka fanampiny naverina amin'ny laoniny
Azonao atao avereno fanaka fahagola ary omeo azy ireo ny endrika izay tianao indrindra. Azonao atao ny manome azy ireo rivotra maoderina na mahazatra, na hamerina azy ireo amin'ny fomba fiotazam-boaloboka. Manana safidy maro ianao, manomboka amin'ny talantalana ka hatramin'ny latabatra am-pandriana, mandalo fitaratra, talantalana na singa mihantona, latabatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa tanana an-trano » Hevitra fanaingoana DIY ho an'ny efitrano fandriana
Superhero mahery miaraka amina kitay sy karda